Siri anogona kukubatsira uye tinokuratidza kuti sei | IPhone nhau
Siri akatinhira mune imwe nzira yakasviba. Mazhinji emabasa anodakadza atakaona mukuwongorora kwekutanga aive akaganhurirwa kuUnited States uye chokwadi ndechekuti kune dzimwe nyika senge Spain kushandiswa kwavo kwaive kungogumira pakukwanisa kufonera vamwe vanhu nekukurumidza, sekusina maoko. Asi kubva payakatangwa kusvika nhasi, mubatsiri weApple akavandudza zvakanyanya, uye kunyangwe pachine zvakawanda zvekuita, Hongu, inotipa mabasa ayo vashandisi vazhinji veIOS vasingazive uye izvo zvinotibvumidza isu kuchengetedza nguva pamwe nekuve wakasununguka zvakanyanya kupfuura zvakajairwa imwe sarudzo. Tinokuratidza muvhidhiyo mimwe mienzaniso yezvandinokuudza.
Imwe yemabhenefiti akakura aSiri ndeyekuti inotibvumidza kuti tiwane mazhinji emabasa kubva kukiyi skrini, tisingafanirwe kuvhura chishandiso, icho chinotipa kukurumidza uye nyore kuwana mukana wekutsvaga paInternet, kufona kana kutumira mameseji, kana kubvunza nzvimbo dzepedyo senge maresitorendi. Kune mamwe mabasa, zvinotikumbira kuti tivhure mudziyo, kunyanya kana zvichida kuvhura application yekunze.
Kuuya kwaSiri kuApple Watch kuri "kutangazve" kweye chaiyo mubatsiri nekuda kwekunyaradzwa kunopihwa neApple wachi kuita mabasa ese aya, asi chokwadi ndechekuti zvakafanana zvinogona kuitwa kubva ku iPhone yedu kana iPad uye zvakawanda kana kuziva. Pachine nzvimbo yakawanda yekuvandudza, sekusvika kwerunyerekupe rweSiri paApple TV kubvumira kudzora zvishandiso zvedu kubva kuimba yekutandarira, kana Apple makomputa. Iyo zvakare ingave inonakidza sarudzo uye kuti Apple inogona kuisa mune yayo inotevera vhezheni yemafoni nhare (iOS 9) mukana wekuti wechitatu-bato kunyorera vanokwanisa kuwana Siri, sezvakatoitika muIOS 8 neTouch ID.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 8 » Siri anogona kukubatsira uye tinokuratidza kuti sei
Amazon inotipa mheni yayo Mheni MFi nemutengo unodhura zvakanyanya